Deessuu =danDeessuu-Dhufera Birasaa’tiin. – Beekan Guluma Erena
Deessuu =danDeessuu-Dhufera Birasaa’tiin.	Beekan Guluma Erena
Poems May 18, 2016May 18, 2016OROMO
Namichatu fuudhee,dhala godhatee, akkuma jireenya hoo’ifateen sammuu dhibame. Ollaan bitaa-mirgaa harka namaati jedhee odeessa. Dhagaa fi sibiila biyya jiruu walitti guuree deema. Al-takka takka yemmuu bal godhu dhagaama baatee deemuun abbaa itti dhufe falaxee lafa buusa. Hawaasi hindhabu mudaa, rakkoo guddaa…
Mootummaan biyya keenyaa fayyaa malee maraatuu hinhidhu. Qe’een isaaniis ta’e naannoo guutuutti gooliin bu’e. Namni ijoollee gamaa-gamanatti ergachuu sodaate. Haati manaa gaafa lubbuun morma geessu mucaa jalaa fudhattee warratti baqatte. Alaa fi manni, mukaa-baalli nuffee waan godhu wallaale. Namuu maal akka wayyu gad-taa’ee mari’ate. Kaan manuma keessatti harkaa fi miilisaa funyoon xaxamee haataa’u jedhan. Kuun garuu sichi jireenyatti deebi’uu waan hindandeenyeef heeyama abbaa, Haadhaa, haadha manaa fi obboleeyyiin haa ajjeefamu jedhan. Yaadi gara filannoo isa lammaaffaatti caaluu argite haati.
“Inni du’uurra ani du’uutu salphata.” Jechashee kanatti namni afaan tokko dabale hinjiru. Namuu na’ee diilallaa’e, jaarroliin biyyaa fi dargaggoon lafa buufate tokko tokkoon ba’ee qajeele. Nama qalbiin dabree, waa balleessuu malee tolchuu dadhabe, nama hundumtuu yaalii qabu xumuree akka waan fala hinqabneettii lakkaa’e,…Inni haajiraatuu iddoosaa naan ajjeesaa jette.
Waggaa heedduu booda haati manaa ni heerumte, abbaan nidu’e. Waliin jiraachuu dadhabanii obboleeyyiin firaa-firatti baqatan. Sammuunsaa, hojiinsaa akkuma sana, garuu amma guyyaa har’aatti haadhasaa waliin mana tokko jiraatu. –
Deessuu = Dandeessu
← ANATU KEETI!-(OROMIYAA………!) ANI ANUMA!
QAWWEEYYUU HINDAHGA’U-(Abbaa Magaal irraa)- Qeerroo Abdii Oromiyaa’tiin →